कसरी खेल केन्द्र अक्षम गर्न ग्याजेट समाचार
कसरी खेल केन्द्र असक्षम गर्ने
एप्पल उपकरणहरूमा खेलको आकस्मिक र नियमित प्रयोगकर्ता दुबैका लागि, खेल केन्द्र अनुप्रयोग सुअरमा डेजी फ्याँक्नु भन्दा बढी बेकार हो। यो बिल्कुल बेकार छ। हो, त्यसैले प्रत्येक पटक हामी केहि खेलहरू खेल्न प्रवेश गर्दा एक विशाल पोस्टर यस्तो देखिन्छ कि हामी पहिले नै हजारौं मानिसहरू (जो पक्कै समान सोच्दछन्) को साथ जडित छौं। वास्तवमा वर्षौंको अवधिमा एप्पलले नयाँ आईओएस within भित्र यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउने विचार गर्न थालेको छ, जुन यस वर्षको सेप्टेम्बरमा जारी हुनेछ।
भाग्यवस हामी यसलाई निस्क्रिय गर्न सक्दछौं ताकि यो हामी प्रत्येक चोटि खेल्दा निरन्तर सताउँदैन। यस तरिकाले, प्रत्येक खेलमा प्रवेश गर्दा, अब हामी गेम सेन्टरको लागि पर्खनु पर्नेछैन जसले हामीलाई हाम्रो प्रगति वा हाम्रा साथीहरूको सूचना दिन्छ। यसका लागि हामीले अगाडि बढ्नुपर्नेछ जब हामी तपाईंलाई तल सूचित गर्दछौं।
सबै भन्दा पहिले हामी सेक्सन मा जानु पर्छ सेटिंग्स हाम्रो उपकरणको।
हामी अवस्थित विकल्पहरूको पाँचौं ब्लक खोज्दछौं खेलकुद केन्द्र। उपलब्ध विकल्पहरू दायाँ तिर प्रदर्शित हुन्छन्।
अब हामी पहिलो विकल्पमा जानु पर्छ जहाँ यो देखिन्छ हाम्रो आईडी र प्रेस.
उपकरणले हामीलाई options विकल्पहरू देखाउँनेछ: लग आउट गर्नुहोस् के तपाईंले आफ्नो एप्पल आईडी बिर्सनुभयो? र रद्द गर्नुहोस्। खेल केन्द्र निष्क्रिय गर्न र हामीलाई खुशीयाँ सन्देशहरू हामीलाई नदेख्न पहिलो विकल्प बन्द गर्नुहोस् सत्रमा क्लिक गर्नुहोस्.
अर्को, हाम्रो एप्पल आईडीको नाम देखाइनेछ र खाली ठाउँ जहाँ हामीले खेल केन्द्र पुन: सक्रिय गर्न सक्षम हुन हाम्रो खाताको पासवर्ड लेख्नुपर्दछ। अब देखि, हामी पहिलो पटक आफ्नो सामान्य मनपर्नेमा फर्कन्छौं, पहिलो पटक यसले हामीलाई यसलाई सक्रिय पार्न सोध्नेछ, हामीले यो चरणलाई सँधै छोड्ने रद्द गर्न क्लिक गर्नुपर्नेछ। अबदेखि आईओएस को एक सबसे बेकार अनुप्रयोगहरु अब हामीलाई सताउने छ.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » टेलिफोनी » मोबाईलहरू » कसरी खेल केन्द्र असक्षम गर्ने
धन्यबाद, यो ठूलो सहयोग थियो। त्यो अनुप्रयोग बेकार छ।
Josue लाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईको सल्लाहले काम गर्दैन।
जे होस् मैले यसलाई निस्क्रिय गरेको छु, यो देखिन जारी रहन्छ
तपाईंको सुझावको लागि धन्यवाद। मैले यसलाई पछ्याएको छु र सक्रिय गर्न विकल्प अझै पनी देखा पर्छ तर कम्तिमा म यो हरेक पटक बाहिर आउँदा रद्द गर्न सक्दछु।
अस्टुरलाई जवाफ दिनुहोस्
कसरी फायरफक्स मा खोज पट्टी ईतिहास हटाउने
Ascii जेनेरेटर २ का साथ ASCII छवि सजीलै तस्विरमा कसरी रूपान्तरण गर्ने